कतारबाट ७ महीनाको पे’ ट बो के र फर्किएकी युबतीले आफुलाई यस्तो अबस्थामा अलपत्र पारेर छोडेर जाने युवकलाई भेटाईंन (भिडियो सहित) – Dainik Samchar
कतारबाट ७ महीनाको पे’ ट बो के र फर्किएकी युबतीले आफुलाई यस्तो अबस्थामा अलपत्र पारेर छोडेर जाने युवकलाई भेटाईंन (भिडियो सहित)
August 13, 2021 406
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतार बस्दै आएकी झापा बृतामोडबाट एकजना चेली युवा मञ्च नेपालका सँग आएकी छिन्। उनको खास घर इलामको दानाबारीमा रहेको उनी बताउँछिन्। उनी विगत लामो समयदेखि कतारमा कार्यरत थिइन् सोही क्रममा पश्चिम् मुगुका एकजना कपुर बाम भन्ने व्यक्तिसँग उनको सम्बन्ध हुन गयो र उनको पे ’ट मा ग ’र्भ रहन गयो।
उनले त्यी युवकसँग आजभन्दा नौ महिना अगाडि देखि सम्बन्ध हुँदै आएको र यस अघि पनि त्यी युवाले उनलाई औषधि खुवाएर दुई पटक जति ग’र्भ फा’ल्न लगाएका रहेछन्। उनी पहिलेओ लकडाउनको बेला क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी थिइन् र त्यहिबेला त्यस केटाले उनलाई टिकटकमा म्यासेज गरेको थियो। तर त्यी चेलीको ग’र्भ रहिसकेपछी बेखबर नेपाल आएर भएका र यहाँ आएर पनि बेखबर बसेका त्यी युवालाई खोजी गर्न भनी त्यी चेली पनि नेपाल आएर आफूलाई ग’र्भ ब ना उने कपुर बामको खोजी गरिरहेकी थिइन् र सोही क्रममा उनी मिडियामा आइपुगेकी थिइन्।
त्यतिबेला उनले आफूले बिहे पनि गरेको छैन र काठमाडौँबाट पढ्दापढ्दै आएको हो र आफू परीवारको एक्लो छोरो भएको अनि एउटा बहिनी जसको बिहे पनि एकवर्ष अगाडि भएको बताएका थिए। उनीहरू सुरुसुरुमा साथीसाथीको सम्बन्ध बनाएर बोल्दै गए। उनले त्यी केटाको दाइ र उनका साथीहरूलाईसमेत सोधपुछ गर्दा सबैले उसको बिहे नभएको बताएका थिए।
एकदिन उनको श्रीमतीको फोन आयो र त्यी चेलीले फोन उठाइन् र कुराकानी गरिन्। कपुरको त पहिले नै चार वर्ष अगाडि बिहे भैसकेको रहेछ र उनको एउटा दुई वर्षको छोरी पनि रहेको थाहा पाइन्। त्यतिबेला सम्म उनको पे टमा ब च्चा बसिसकेको थियो र दुई महिना भैसकेको थियो। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरर थाहा पाउनुहोस।
Prevमाग्नेले काखमा लिएको बच्चा किन सधैं निदाइरहेको हुन्छ ?
Nextनेपालमा बनेको बाइक नेपालिले नै किन्न नसक्ने , कति छ नेपालमै बनेको बाईकको मुल्य ?
श्रीमान् तीन बर्ष देखि साउदी अरेवियामा पसिना बगाउँदै, बाग्लुङमा श्रीमति कसरी भइन् गर्भवती?
भाईरल चियावाली सृष्टिले मनाईन् प्यारी छोरीको जन्मदिन, छोरीको जन्म दिनमा छोरालाई सम्झेर भाबुक हुँदै एस्तो संदेश(भिडियो)
चर्चामा युएसबी कण्डम : के हो यो ? यसले के काम गर्छ ? कसरी प्रयोग गर्ने ?
नायिका एलिजा गौतमले क्यानाडाबाटै सबैलाई चकित पारिन , ऋषि धमलालाई सम्झिदै राखिन यस्तो पोष्ट
हरिवंश आचार्यको सुझाव- ‘विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा एक टुक्रा जग्गामा खेर नफाल्नुहोस्’ (1400)
जनता टाइम्सका संपादक शान्तिराम कार्कीको निधन (1153)
बच्चा जन्माएको भिडियो प्रियंकाले आफैँ सार्वजनिक गरिन् (भिडियो हेरौँ) (1091)
पारशसँग बाइकमा हिँड्ने युवति गायिका रहेको खुलासा (919)
आफ्नो डिभोर्सको बारेमा पहिलो पटक रुँदै बोलिन चर्चित टिकटकर स्मारिका ढकाल (भिडियो हेर्नुस्) (819)
मनमा अलिकती पनि दया माया भएआफ्नै दाजु भाइ सम्झेर RIP लेखी सेयर गर्दिनु होला।????भाइको आत्माले शान्ती पाउनेछ (790)